10 Steakhouses kacha mma n'ụwa | Save A Train
Home > Travel Atụmatụ > 10 Steakhouses kacha mma n'ụwa
(Emelitere ikpeazụ On: 30/07/2021)
Mgbe inuru okwu a, ozugbo ị ga-eche ma US ma ọ bụ Europe. Otú ọ dị, ọ bụghị nanị ebe ndị a ka a na-azụ ehi ma na-eri anụ. Wagyu na Kobe, nke a na-ahụta kachasị mma beef n'ụwa, sitere na Japan. Ọzọkwa, ebe dị ka Portugal na Argentina kwesịrị ịkọwa aha pụrụ iche.
Anụ ehi na-ata ahịhịa nke otu mpaghara ga-enwe ọmarịcha ụtọ pụrụ iche maka mpaghara a kapịrị ọnụ. Ebe ahụ kwuru na, a kemmiri ịkpụ nke ibe anụ bụ-aga na-nhọrọ n'ihi na a ọtụtụ nke anụ ndị hụrụ. Anyị edepụtala ndepụta a 10 Steakhouses kacha mma n'ụwa, nke kwesịrị ịdị na nke gị ịwụ ndepụta ma ọ bụrụ na steak bụ otu n'ime nri kachasị amasị gị.
1. Ezigbo Steakhouse, London
N'ime ụlọ steak kachasị mma n'ụwa, Goodman sitere na New York. Goodman mepere alaka London 2008, na aha a gbasaa na ebe atọ ọzọ kemgbe ahụ.
Enweela ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ahụ Michelin Star ma ndị ahịa ya hụrụ ya n'anya n'ihi akpụkpọ anụ ya na nkụ ya na-eickingomi New York vibe. Ndị ahịa nwetara nhọrọ ịhọrọ Spain, UK, ma ọ bụ US he. Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ahụ na-eme ka anụ ya dị afọ iri na ụma ma na-anya isi na ọgịrịga ya.
2. Cylọ nke Mancy, Toledo
Cylọ nke Mancy na Toledo, Ohayo, bụ otu n'ime ụlọ ọrụ akụkọ ifo. E guzobere steakhouse na 1921 na, ọ bụrụ na ndị obodo ka ekwere, na-aga n'ihu na-juru n'ọnụ kemgbe ụbọchị 1, ọbụna n'ụbọchị izu. A dụrụ ya ọdụ ka ịlele Toledo ihu igwe tupu ịpụ ebe ahụ ebe ọ bụ na ịnwere ike ichere ntakịrị ịbanye.
Ọ kacha mma ịhọrọ ụbọchị mgbe ihu igwe na Toledo dị mma, na ichere n’èzí ga-eme ka atụmanya nke ihe maka gị dị n’ime, anaghị amanye gị ịlaghachi ebe ọzọ. Aklọ nri Mancy na-elekọta USDA Certified Angus, na Angus Prime Steaks ndị meworo agadi na ndị a na-egbu anụ na saịtị. Ndị na-achịkwa azụ na-a swearụ iyi site na nri mmiri a na-arụ ebe a, karịsịa Alaskan King Crab na Lobster Australia.
3. EBIBI Site na Wolfgang Puck, Singapore
Wolfgang Puck achọghị mmeghe. Onye nwe obodo Austrian amụrụ ama ama ama ama ama nke ụlọ oriri na ọ restaụ openedụ mepere ụlọ oriri na ọ firstụ Asianụ Asia mbụ ya CUT na Marina Bay Sands, Singapore, na 2010. Kemgbe CUT alaeze amụbawo na ụwa, mana ngalaba Singapore ka na -akacha mma.
Ndị ahịa nwere ike ịnụ ụtọ Kobe nke klaasị ụwa, 300-ụbọchị nri-eriju Angus, ma ọ bụ A5 Wagyu. Ọkachamara nke ntọala a bụ ọtụtụ ofe dị n'ụlọ na mmanya buru ibu nke na-aga nke ọma nke anụ ọhịa ọ bụla.
Aragawa dị na Tokyo bụ otu n'ime ụlọ steakụ dị oke ọnụ n'ụwa. Restaurantlọ oriri na ọredụ Micheụ nke Michelin mara ọkwa maka onye siri nri – Yamada Jiro, onye na -eje ozi naanị anụ Kobe kacha mma n'ụwa.
USP nke ụlọ oriri na ọ thisụ thisụ a bụ na ọ na-ewelite ìgwè ehi ya nke ezigbo anụ Tajima dị ọcha kemgbe mmalite ya 1967. Ọmarịcha njikwa dị mma na nhọrọ kachasị mma nke mkpọ a na-eje ozi na-eme Aragawa nhọrọ nhọrọ okomoko.
Azụmaahịa ezinụlọ a na-anya isi na asambodo izizi USDA. Ha na-ebubata anụ kacha mma site na etiti ọdịda anyanwụ ma na-akọrọ afọ ya na ogige ahụ. Nke a otu Michelin-starred ụlọ oriri na ọ isụ isụ bụkwa ndị kasị ochie, ebe e guzobere na 1887.
A na-ahụta ebe a dịka akara ngosi nke ebe iri nri New York City na ọtụtụ ụzọ ngafe nke ọtụtụ. Ibe anụ ahụ Porterhouse, akọrọ-agadi na ogige maka 28 ụbọchị, bụ efere akwadoro nwere akụkụ nke German eghe poteto na n’ime ụlọ efere.
Onye Paolo Mugnai na-agba oso na Tuscany, Antica Osteria mepere ụzọ ya 2007 ma nwere a jide, ụwa ochie na-eche maka ahụmịhe iri nri kachasị elu. A maara ụlọ oriri na ọụ forụ ahụ maka Bistecca Alla Fiorentina, steak Italian nke anụ anụ ma ọ bụ nwa ehi na-eri na nri dị mkpa na nri Tuscan.
Isi ihe dị na ahụmịhe iri nri na Antica Osteria bụ onye siri nri na-akwadebe anụ ahụ n'ọkpụkpụ n'ihu gị n'iji ihe ọ bụla ma mmanụ Tuscan oliv na ntakịrị nnu nnu.
7. Ogwe Gibsons & Lọ ụlọ, Chicago
Na Chicago, Ogwe aka Gibsons na Steakhouse na-anya isi na ha bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ firstụ mbụ dị na mba ahụ iji nweta nke ha Asambodo USDA maka anụ ehi Prime Angus.
A maara ụlọ oriri na ọ restaurantụ forụ ahụ maka ehi Black Angus, ọka-nri maka 120 ụbọchị ma akọrọ-agadi na ogige maka 40 ụbọchị. Ndị bi ebe a na Chicago na-a swearụ iyi WR si Chicago bee anụ, okpukpu okpukpu abụọ dị n'akụkụ, na Gibsons a ma ama na -etinye nnu.
8. Lọ Grillhouse, Johannesburg
A na-ahụta ụlọ Grillhouse na Johannesburg dị ka ụlọ kacha mma na South Africa. A maara ụlọ grill-style nke New York maka ijere fillet na-esi ísì ụtọ nke ụwa na ọgịrịga ndị mara mma nke ejikọtara ọnụ na ezigbo malts. obodo mmanya.
A na-ama ebe a maka ọgịrịga ya dị nwayọ nwayọ, nke a asara n’ọkụ n’ere ire ọkụ site n’ebe ọ bụla n’agbata itoolu ruo 12 awa. Ọpụrụiche ndị ọzọ nke ebe ahụ gụnyere T-ọkpụkpụ na akụ. Ihe setịpụrụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ a dị iche iche bụ anụ ọhịa anụ ọhịa South Africa dị elu yana ezigbo ndị ọrụ ọrụ.
Dị ka anyị kwuru na intro, Argentina bụ otu n'ime mpaghara kachasị mma iji mepụta ehi na-atọ ụtọ ma sie ụtọ na-atọ ụtọ mpaghara. La Cabana bụ otu n'ime ụlọ oriri na ọ celebratedụ celebratedụ kachasị eme ememe na Buenos Aires, emi odude ke ebiet emi odude ke obio.
Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na-eje ozi steaks maka nri ụtụtụ, nri ehihie, na nri abalị. Fọdụ ndụmọdụ dị mfe gụnyere steak T-ọkpụkpụ ha, nwa ehi, isi ọgịrịga, na mkpa warara ọgịrịga. Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ahụ na-enyekwa ọtụtụ nchịkọta mmanya dị mma iji soro steak gị.
10. Achịcha, Leon, Spain
El Capricho in Leon, Spain, a na-ewere ya dị ka njem njem site na ndị hụrụ anụ n'anya ebe ọ bụ na ọ kwụsịrị kpamkpam egwu egwu, pụọ n'ebe kacha ewu ewu njem nleta na-adọrọ mmasị na Spain. Emi odude ke Leon, Ọ bụ Jose Gordon na-elekọta El Capricho, onye ezumike, osi nri, na ɔbarima.
A maara ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ahụ maka anụ ya zụrụ site na ehi na ehi ochie si na mmiri Iberian dị n'agbata afọ asaa na afọ iri na atọ. Ozugbo gburu, enwu anụ-nkụ maka 160 ụbọchị, nke dị elu karịa ụkpụrụ. Ndị ahịa nwere ike ịnụ ụtọ ọkpụkpụ T, entrecote, ma ọ bụ sirloin grilled to okè on an emeghe ọkụ imi ihe, jikọtara ya na otu iko mmanya kacha mma mpaghara.
Nke a mechie ndepụta anyị nke ụwa kachasị elu 10 ụlọ kacha mma. Ọ bụrụ n’ịlere onwe gị dị ka steak hụrụ n’anya, otu n'ime ndị a kwesịrị ịdị na ndepụta ịwụ gị.
ebe a na Save A Train, anyị ga -enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem nri nri na 10 Steakhouses kacha mma n'ụwa.
Ịchọrọ itinye ozi blọgụ anyị "10 Steakhouses kacha mma n'ụwa" na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Fbest-steakhouses-world%2F- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ezigbo ụlọ ụlọ Ụlọ kacha mma n'ụwa niile Anụ anụ Ndị na -eri anụ Steak Lọ ụlọ